Burcad badeedda Soomaaliya oo laga batay - BBC Somali
18 Juunyo 2013
Image caption Xeebaha Afrikada Galbeed ee budhcad-badeedda
Warbixin uu soo saaray xafiiska caalamiga ah ee maraakiibta iyo badaha ee IMB, ayaa lagu muujiyey in weerarrada budhcad-badeedda ee ka dhacay xeebaha Afrikada Galbeed inay ka kor mareen haatan kuwa ka dhaca Xeebaha Soomaaliya.
Gobollada Afrikada Galbeed
Weerarrada budhcadbadeedda gobollada Afrikada Galbeed ee dhacay kalhore amma sannaddii la soo dhaafay ee 2012 waxa lagu qiyasaya ilaa 966 weerar, halka kuwa ka dhacay xeebaha Soomaaliya isla sannadkaasi ay ahaayeen ilaa 851.
Warbixintu waxay intaasi ku dartay in weerrarada budhcad-badeedda xeebaha Afrikada Galbeed ujeeddadooda ugu weyni inay tahay maraakiibta saliidda sidda oo ay beegsadaan, si ay uga dhacaan saliidda, agabka iyo hantida ay ka helaan shaqaalaha maraakiibta oo ay sii iibiyaan. Waxayna si xun oo ku-dacati ah ula dhaqmaan shaqaalahaasi oo ay u geystaan dhibaatooyin badan.
Warbixintu waxa kale oo ay sheegtay in ilaa shan qof oo ka mid ah 206 badmareen oo la qafaashay in la diley muddadaasi.
Image caption Soohdimaha budhcad-badeeddu aafaysey ee xeebaha Soomaaliya, Badda Cas, iyo Badweynta Hindiya
Warbixintu waxay intaasi ku dartay in in kasta oo ay sii bateen weerarrada budhcad-badeedka ee khooriga Guinea ee Galbeedka Afrika, haddana in aan adduunku ku baraarugin oo aanu u soo jeesan sidii wax looga qaban lahaa, si la mid ah sidii looga hortegey budhcad-badeedda xeebaha Soomaaliya.
Wararka laga soo xigtey badmareennada la afduubay ee xeebaha Soomaaliya iyo kuwa Afrikada Galbeed marka la isbarbar dhigo, waxay sheegeen in si dhakhso ah loo helo lacagaha iyo waxa ay doonayaan budhcad-badeedda xeebaha Afrikada Galbeed, halka kuwa Soomaaliya ay ku qaadato muddo bilo ah, laakiin in kuwa Afrikada Galbeed muddo toddobaadyo ah guduhooda inay ku qaataan lacagihii iyo iibinta saliiddii ay dhaceen intaba.
Isla markaasi warbixintani waxay sheegtay in weerrarada budhcad-badeedda ee xeebaha Soomaaliya inay hoos u dhaceen ilaa 78% sannadkii 2012 marka loo eego heerka ay ahaayeen sannaddi taas ka horreysey ee 2011. Taasina waxa lagu tilmaamay inay ugu wacan tahay shaqaalaha maraakiibta oo ku tababartay xeelado cusub oo lagaga badbaado weerarrada budhcad-badeedda iyo maraakiibta oo samaystay ilaalo hubaysan oo saaran maraakiibtaasi, si ay iskaga celiyaan budhcad-badeedda.
Image caption Scott iyo Jean Adam oo la diley ka dib markii budhcad-badeed Soomaali ahi ay afduubeen
Laakiin weli waxa jira ilaa 78 qof oo ay sii haystaan budhcad-badeedda Soomaalidu, kuwaasi oo qaarkood la haystey in ka badan laba sannadood.
Warbixintu waxa kale oo ay xustay in budhcad-badeedda Soomaalidu ay sidoo kale isticmaalaan, marar bada, falal naxariis-darro iyo ciqaab ay u geystaan shaqaalaha ay afduubtaan, si ay u helaan lacag madax-furasho ah, qaarna la diley amma ay ku dhinteen weerarro lagu soo furanayey dad la-haystayaal ah.
Iskaashi iyo ka-hortag Caalmi ah
Warbixintani ay soo saartay heyadda IMB ee xafiiska maritaanka badaha caalamiga ah iyo maraakiibta, waxa lagu soo gababeyey talooyin ay ka mid yihiin in loo baahan yahay iskaashi caalami ah si looga hortago budhacd-badeedda xeebaha Soomaaliya iyo kuwa Afrikada Galbeed labadaba, dhinaca badaha iyo berrigaba, si loo sugo nabadgelyada maraakiibta iyo shaqaalaha. Iyo in isla markaasi la dersado sidii dhaqancelin iyo shaqooyin kale looga abuuri lahaa dhallinyarada ku biiraysa budhcad-badeedda.